Iprofayile yeAluminiyam-Jiangyin City Metals Products Co., Ltd.
Izinto ezilungileyo ze-aluminiyam ekhutshiweyo
●Ikhaphukhaphu:I-aluminium imalunga ne-1/3 yobunzima bentsimbi, intsimbi, ubhedu okanye ubhedu, okwenza i-aluminium extrusions ibe lula ukuyiphatha, ingabizi kakhulu ukuyithumela, kunye nezinto ezikhangayo zokusetyenziswa kwizicelo apho ukunciphisa ubunzima kubaluleke kakhulu njengokuthutha kunye nezinye izicelo ezibandakanya. iindawo ezihambayo.
●Yomelele: I-Aluminiyam extrusions inokwenziwa ibe yomelele njengoko ifuneka kwizicelo ezininzi kwaye, ngenxa yobume benkqubo yokukhutshwa, amandla anokugxininiswa apho afuneka ngokwenene ngokubandakanya ukuhluka kobunzima bodonga kunye nokuqiniswa kwangaphakathi kwiprofayili yoyilo.Usetyenziso lwemozulu ebandayo lubonelelwa kakuhle kakhulu zii-extrusions, njengoko ialuminiyam isiba namandla njengoko amaqondo obushushu esihla.
●Kuphezulu kumandla wobunzima: I-Aluminiyam extrusions 'indibaniselwano eyodwa yamandla aphezulu kunye nobunzima obuphantsi bubenza balungele izicelo ezifana ne-aerospace, i-trailer yelori kunye neebhulorho apho ukuthwala umthwalo kuyinkqubo ephambili.
●Omelele:I-Aluminiyam idibanisa amandla kunye nokuguquguquka, kwaye inokuguquguquka phantsi kwemithwalo okanye i-spring back from shock of impact, ekhokelela ekusebenziseni amacandelo akhutshiweyo kwiinkqubo zokulawula ukuphahlazeka kweemoto.
●Ukumelana nokuMhlwa:I-Aluminiyam extrusions inika ukuxhathisa okugqwesileyo kokutya.Abayi-rust, kwaye i-aluminium surface ikhuselwe yifayile yayo ye-oxide eyenzeka ngokwemvelo, ukukhuselwa okunokuphuculwa nge-anodizing okanye ezinye iinkqubo zokugqiba.
● Ii-thermal conductors ezigqwesileyo:Ngokusekwe kubunzima kunye neendleko zizonke, i-aluminiyam iqhuba ubushushu nokubanda ngcono kunezinye i-METALS eziqhelekileyo, iyenza i-extrusion ilungele izicelo ezifuna ukutshintshiselana kobushushu okanye ukuchithwa kobushushu.Ukuguquguquka koyilo lwe-Extrusion kuvumela abaqulunqi ukuba baphucule ukuchithwa kobushushu kwizindlu kunye namanye amacandelo.
● Ihambelana nendalo kwaye inokuphinda isetyenziswe kwakhona : Ialuminiyam ayingcolisi okusingqongileyo.Kwaye i-aluminiyam inokuphinda isetyenziswe kwakhona, kwaye ukusebenza kwe-aluminiyam ehlaziyiweyo iphantse yafana ne-aluminiyam yokuqala.
Inkqubo ye-Extrusion yeprofayili ye-aluminium
Inkqubo ye-aluminium extrusion ngokwenene iqala ngenkqubo yoyilo, kuba kuyilo lwemveliso - ngokusekelwe kusetyenziso olujoliswe kuyo - olumisela ezininzi iiparitha zokugqibela zokuvelisa.Imibuzo malunga nokusebenza, ukugqiba, kunye nokusingqongileyo kokusetyenziswa kuya kukhokelela ekukhethweni kwe-alloy ukuba ikhutshwe.Umsebenzi weprofayili uya kugqiba uyilo lwefom yayo kwaye, ngenxa yoko, uyilo lwedayithi eyimilo.
Emva kokuba imibuzo yoyilo iphendulwe, inkqubo ye-extrusion yangempela iqala nge-billet, izinto ze-aluminium apho iiprofayili zikhutshwe khona.Ibillet kufuneka ithambe bubushushu phambi kokukhutshwa.Ibillet eshushu ifakwa kumatshini wokushicilela we-extrusion, isixhobo esinamandla samanzi aphantsi komhlaba apho inkunzi yegusha ityhala ibhloko ye-dummy enyanzela intsimbi ethambileyo ngembobo echanekileyo, eyaziwa ngokuba yi-die, ukuvelisa imo efunekayo.
Lo ngumzobo olula womatshini wokushicilela othe tye oxwesileyo wehydraulic extrusion;isalathiso se-extrusion apha sisuka ekhohlo ukuya ekunene.
Leyo yinkcazo eyenziwe lula yenkqubo eyaziwa ngokuba yi-direct extrusion, eyona ndlela ixhaphakileyo esetyenziswayo namhlanje.I-extrusion engathanga ngqo yinkqubo efanayo, kodwa inomahluko obalulekileyo.Kwinkqubo ye-extrusion ethe ngqo, i-die imile kwaye inkunzi yegusha inyanzelisa i-alloy ngokuvula kwi-die.Kwinkqubo engathanga ngqo, ukufa kuqulethwe ngaphakathi kwenkunzi yegusha, ehamba kwi-billet emileyo ukusuka kwelinye icala, ukunyanzela isinyithi ukuba sigeleze kwinkunzi yegusha, sifumana ubume bokufa njengoko senza njalo.
Inkqubo ye-extrusion ifaniswe nokukhama intlama yamazinyo ngaphandle kombhobho.Xa uxinzelelo lusetyenziswa ekupheleni okuvaliweyo, i-paste iphoqeleka ukuba ihambe ngesiphelo esivulekileyo, ivume ukuma okujikelezayo kokuvula njengoko kuvela.Ukuba ukuvuleka kucacile, i-paste iya kuvela njengeribhoni ecaba.Imilo entsonkothileyo inokuveliswa ngokuvuleka okuntsonkothileyo.Ababhaki, umzekelo, basebenzisa ingqokelela yemilomo emile ukuhombisa amaqebengwana ngamabhanti anqabileyo e-icing.Bavelisa imilo eyongeziweyo.
Njengoko kucetyisiwe kule mibhobho ye-toothpaste, imilo ye-extrusion (iprofayili) inqunywe ngokubunjwa kokuvula (kufa).
Kodwa awukwazi ukwenza iimveliso eziluncedo kakhulu ngentlama yamazinyo okanye i-icing kwaye awukwazi ukukhama i-aluminiyam kwityhubhu ngeminwe yakho.
Ungayicudisa i-aluminiyam ngokuvula okumilisekileyo, nangona kunjalo, ngoncedo lomatshini wokushicilela onamandla wehydraulic, uvelisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso eziluncedo eziphantse zibe yiyo nayiphi na imilo onokuyicinga.
Ukugrumba, ukubrasha, ukuThwaza, ukugawula, ukumenyezwa, ukuqhushumba, ukuqhushumba, ukudutyulwa kweentsimbi, ukutshisa, ukutshisa, iAnodizing, ukugquma iPowder, Electrophoresis